Faah faahin:- Sida ay maanta u dhacday xafladda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Sida ay maanta u dhacday xafladda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo (SAWIRO)
Xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gaba-gabeeyay xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, iyadoona ay kasoo qeyb-galeen marti sharaf kala duwa ee xafladaasi lagu casuumay.
Mas’uuliyiin badan oo isugu jira madaxweynayaasha Kenya, Jabuuti, ra’iisul wasaaraha Itoobiya, madaxweyne ku-xigeenka Suudaan, wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar, wafdi ka socda dowladda Kuwait, wakiilo ka socda Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika, IGAD, dowladaha Mareykanka iyo Turkiga.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Machael Keating oo hadal kooban ka jeediyay goobta ay xafladda ka dhacday ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay heysato taageerada beesha caalamka oo dhan, shacabkana looga baahan yahay inay la shaqeeyaan.
Sidoo kale, wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira oo isna hadal kooban ka jeediyay goobta ay xafladdu ka socotay ayaa isna sheegay inuu u hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
“Midowga Afrika adiga iyo shacabkaaga ayuu la jiraa Mudane Madaxweyne Farmaajo” Sidaas waxaa yiri Danjire Madeira.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiyaha Hailemariam Desalegn ayaa dhinaciisa sheegay sheegay in dowladda Itoobiya ay aad u taageerayso Soomaaliya islamarkaana ay ka caawinayso dhinacyada ammniga iyo la dagaalanka argagixisada.
“Doorashada Soomaaliya ka dhacday waxay tusaalo u tahay wadamada qilaafaadka uu ka jiro” ayuu sidoo kale yiri ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Madaxweynaha Kenya Uhura Kenyatta oo isna hadal ka jeediyay goobta ayaa balan qaaday inuu abuurayo xiriir wanaagsan oo darisnimo iyo walaaltinimo ku dhisan oo Kenya ay la yeelato Soomaaliya.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya, si loo gaaro wuxuu haminaayo shacabka oo ah in la gaaro Soomaaliya oo wax la qeybsanaysa dunidda inteeda kale.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo hadal ka jeediyay munaasabada ayaa u mahadceliyay dhamaan madaxdii ka soo qeybgashay munaasabadda wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay xiriir wanaagsan ay la yeelato dunida inteeda kale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka haatan horyaala wadanka, oo loo baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto, si Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto.
“Caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah, amni xumo, abaaraha, dhameystirka dib u heshiisiinta, dib u soo celinta kalsooniga shacabka, yareynta faqriga, kobcinta dhaqaalaha, jiheynta dhallinyarada, xoojinta dowladda, xoojinta federaalka, iyo xoojinta xiriirka arrimaha dibadda.” Ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Mar uu madaxweyne Farmaajo ka hadlay arrimaha ciidamada ayuu sheegay in dowladiisa ay hubin doonto mushaaraadka ciidamada inay si sax ah u heleen iyo in kale markasta, iyadoo sidoo kale uu madaxweynuhu u mahad celiyay dhamaan wadamada ay ka joogaan ciidamada AMISOM, maadaama sida uu sheegay AMISOM naf iyo maalba ay u hureen dalkeena.
Mudane Farmaajo ayaa ka hadlay colaada magaalada Gaalkacyo, wuxuuna sheegay in dowladiisa ay ku dadaali doonto sidii loo dhameyn lahaa colaadaas oo aysan mar danbe u soo laaban.
“Dib u heshiisiinta waa geeddi socodka mar hore soo bilowday, waxaan dhameystiri doonnaa dib u heshiisiintaas, waxaa ceeb nagu ah kala qob-qobnaanta Soomaalida wada dhalatay”. Ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa mar uu ka hadlay arrimaha cadaaladda sheegay inay muhiim u tahay dowladiisa isagoo xusay in dib u eegis lagu sameyn doono nidaamka cadaalada, si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan kalsooni.
“Waa in lasoo celiyo kalsoonida shacabka ay ku qabaan dowladda, waa in dowladda ay noqotaa mid u adeegta oo aan ka adeegan shacabka, mid u turta shacabka, oo aan ku tuman.” Ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa balan qaaday dowladda Soomaaliya inay xoojin doonto xiriirka ay la leedahay dunida inteeda kale, maadaama aduunyadda oo dhan ay haatan isku baahan tahay.